कलेज तथा स्कुल पोशाकमा आएका जोडी बिद्याथीले कोठा नपाउने - Sabal Post
२९ असार २०७५, शुक्रबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
यमलाल भुसाल\_बुटवल २९ असार\_प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी रहेको रुपन्देही जिल्लालाई विकृति तथा विसंगती मुक्त जिल्लाका रुपमा स्थापित गराउनका लागि होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीले १६ वर्ष मुनीका व्यक्तिलाई धुम्रपान तथा मदिराजन्य वस्तु बिक्री वितरणमा आफना व्यवसायीलाई रोक लगाएको छ ।
कलेज तथा स्कुल पोशाकमा आएका जोडी बिद्यार्थीलाई होटलको कोठा उपलब्ध नगराउने तर भ्रमण एवम समुहमा कार्यक्रम लिएर आउनेलाई भने यो नियम लागु नहुने संघका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले बताउनु भयो ।
संघल जारी गरेको नयाँ व्यवसायी आचार सहिंतामा होटलमा आउने प्रत्येक पाहुना तथा पर्यटकको परिचय खुल्ने गरि दर्ता गर्नुु पर्ने, दर्तामा फोन नम्बरं. र सङ्ख्या अनिवार्य रुपमा उल्लेख हुनु पर्ने नियम बनाएको संघका महा सचिव माधव कुमार खनालले बताउनु भयो ।
यदी कुनै व्यवसायीले समाजमा विकृति र विसंगती फैलाउने कार्य गरेको पाईएमा र प्रमाणित भएमा स्वतः संघको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिने र कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिस गरिने समेत संघले जनाएको छ ।
होटल रेष्टुरेण्टमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा पोशाकको व्यवस्था गर्नु पर्ने र
खाद्य सुरक्षालाई उच्च महत्व दिदै खाने कुराहरु शुद्घ र सफा राख्नु पर्नेमा जोड दिईएको छ ।
होटलमा कुनै पनि ग्राहकले शंकास्पद गतिविधि गरेमा,तुरुन्तै संस्थाको आधिकारीक व्यक्ति तथा
प्रशासनमा सुचना गर्नुपर्ने आचार सहिंतामा उल्लेख गरिएको छ । संघद्धारा विहिवार आचार सहिताको सार्वजनिक तथा व्यवसायीक अनुगमन समितिको कार्य शुभारम्भ गदै उक्त कुराको जानकारी गराएको हो । अनुगमन समितिका संयोजक रोमाकान्त पाण्डेलाई संघका अध्यक्ष समुन्द्र जिसीले अनुगमनका आवश्यक निर्देशन सहितको कागजात हस्त्तान्तरण गर्नु भएको हो । विहिवारै देखि अनुगमन समितिले सदस्य व्यवसायीको अनुगमन शुरु गरिएको संयोजक पाण्डेले बताउनु भयो ।
समाचार लेखेपछिको धम्कीले आफ्नो हुलिया नै परिवर्तन…
भगवान शिवलाइ छिट्टै प्रसन्नता पार्ने उपाय !
तरुण दलको विवाद उत्कर्षमा : अध्यक्ष र…